ရန်ကုန် ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းအတွက် တောင်းခံထားသည့် ကျပ် သန်း ၁ဝဝဝ ကို လွှတ်တေ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန် ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းအတွက် တောင်းခံထားသည့် ကျပ် သန်း ၁ဝဝဝ ကို လွှတ်တေ??
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ဒေါက်တာမြတ်Óဏစိုး ဆွေးနွေးနေစဉ်။
ရန်ကုန် ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတားစီမံကိန်းအတွက် တောင်းခံထားသည့် ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ ကို လွှတ်တော်မှ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ် လျဉ်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးခြင်းများအပေါ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း တင်ပြချက်အပေါ် ယင်းသို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရန်ကုန် ထောက်ကြန့်ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသစ် စီမံကိန်းသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်ခြင်းမရှိတာကို ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီကလည်း စိစစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် စီမံကိန်းအတွက် မူလလျာထားတဲ့ ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ ကို လွှတ်တော်မှ ငြင်းပယ်၊ အတည်ပြုရန်တင်ပြပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးကတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးကလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အလေအလွင့် မရှိစေရန် ရန်ကုန်- ထောက်ကြန့်လမ်းဆုံ ယာဉ်ကြောကျပ်မှုကို တခြားသော သင့်လျော်သော နည်းလမ်းများနှင့် ဖြေရှင်းပြီး ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတားကို လတ်တလော ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် မလိုကြောင်း ပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတားအတွက် တောင်းခံထားသော ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ အား ငြင်းပယ်သင့်ကြောင်း လေးမျက်နှာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မင်းသိမ်းကလည်း ထောက်ခံပြောဆိုသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်းက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ကြန့်ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ ငြင်းပယ်ရန် အဆိုပြုချက်ကို သဘောတူကြောင်း ပြောသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတားအတွက် တောင်းခံထားသော ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ အား ငြင်းပယ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးတို့က လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုတင်ပြခြင်းနှင့်အတူ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးကလည်း ယင်းအဆို ပြုချက်ကို လက်ခံသဘောတူသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က လွှတ်တော်၌ သဘောထားရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသည့်အတွက် လွှတ်တော်မှ ရန်ကုန် ထောက်ကြန့် ခုံးကျော်တံတားအတွက် တောင်းခံထားသော ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ အား ငြင်းပယ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
City Star Hotel တွင် အဲယားကွန်းအပူလွန်ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်